MIANDRY NY TOMPO NY VAVOLOMBELONA MINO | FJKM Amboniloha
Ho aminareo hatrany anie ny fiadanan’ny Tompo.
Manoloana ny teny fampanantenana omen’Andriamanitra anao, indraindray tsy eo no ho eo avy hatrany ny fahatanterahan’izany. Manana ny fotoanany Andriamanitra hanatanterahana ny teny fikasany. Hoy i Paoly: “Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana hahatanteraka ny sitrapony.” (Filipiana 2, 13). Mila maharitra miandry io fotoanan’Andriamanitra io ianao noho izany. Aza kivy fa andrandrao ilay Tompo ho avy amin’ny fotoanany izay mety tsy ho ampoizinao akory hitondra fanavotana ho anao. (izay naharitra niandry ny Tompo dia tena feno fifaliana tokoa satria nampahitany ny fanavotany. Lioka 2, 38).
“Eny hiandry ny Andriamanitry ny famonjena ahy aho; Andriamanitra no hihaino ahy.” (Mika 7, 7) Eo am-piandrasana ny Tompo dia aoka hiambina amin’ny vavaka sy ny famakiana ny Teniny ary ny fankatoavana izany no ataonao hahafahanao mamantatra hatrany ny sitrapony eo amin’izay rehetra mitranga eo amin’ny fiainanao. Aoka hirehitra hatrany ny jironao ka aza ho anisan’izay adala toa ireo virijiny dimy adala voalaza ao amin’ny Matio 25, 1-13.
Tandremo anefa fa eo ampiandrasana ny fihavian’ny Tompo, Satàna dia tsy mitsahatra ny maka fanahy anao hiantehitra amin’ny zavatra hita maso ety amin’izao tontolo izao izay mandalo ihany. Toa mahasodoka ny vahaolana atolony, toy ny “majia” isankarazany na ny fahazoana harena amin’ny alalan’ny fanompoana “kalanoro” na ny fanompoana “razana” ohatra kanefa dia feno fitaka, satria asan’ny fanahy ratsy tsotra izao no ao anatiny: ny fanahinao lasa any amin’ny fahaverezana anefa no takalony. Eto aho dia mitaona anao, Ianaro izay nataon’i Jesoa raha niatrika ny fakampanahy nataon’i Satàna ka nandresy izany. Hoy indrindra i Satàna raha naka fanahy an’i Jesoa ilay Zanak’Andriamanitra Izy: “Izao rehetra izao dia homeko Anao, raha hiankohoka eto anatrehako Hianao”. “Mandehana hianao, ry Satàna; fa voasoratra hoe “Jehovah Andriamanitrao no hiankohofanao, ary Izy irery ihany no hotompoinao” (vakio Matio 4, 1-11). Na inona na inona olana atrehinao, fahoriana, tsy fisiana, aretina, na aiza na aiza misy anao “Matokia”, hoy Jesoa, fa “Izaho efa naharesy izao tontolo izao”.(Jaona 16, 33); Apetraho Aminy àry ny fanahianao rehetra fa Izy hiady ho anao ary hampandresy anao.
Mety maneso sy mandatsa anao koa angamba ireo tsy mino hoe “Aiza izay Andriamanitrao?” (Mika 7, 10) Aza miherikerika foana amin’izany fa tohizo hatrany ny vavaka mba tsy hidiranao amin’ny fakam-panahy. Matokia fa “Indro ny mason’i Jehovah mitsinjo izay matahotra Azy, dia izay manantena ny famindrampony, mba hanafaka ny fanahiny amin’ny fahafatesana sy hamelona azy raha misy mosary…famonjena antsika sy ampingantsika Izy, fa Izy no ifalian’ny fontsika satria ny Anarany masina no itokiantsika” (Salamo 33, 18-22)
“MAHARETA KOA HIANAREO, MAMPAHEREZA NY FONAREO, FA EFA MBY AKAIKY NY FIHAVIAN’NY TOMPO… AZA MATAHOTRA, INDRO AHO MOMBA ANAREO MANDRAKARIVA AMBARA-PAHATONGAN’NY FAHATAPERAN’IZAO TONTOLO IZAO.(Jakoba 5, 8; Matio 28, 20)
Catégories :	Editorial, Vaovao	/ par AnjGab 20 novembre 2017